May 9, 2022 - New State
အာဏာမသိမ်းခင်က ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောဖူးတဲ့ စကားတစ်ခု ရှိတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို
အာဏာမသိမ်းခင်က ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောဖူးတဲ့ စကားတစ်ခု ရှိတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို အာဏာမသိမ်းခင်က ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောဖူးတဲ့ စကားတစ်ခု ရှိတယ်။ ခွင့်လွှတ်လို့ရတယ် မေ့ပစ်လို့ မရဘူးတဲ့။ အခုကတော့ ခွင့်လွှတ်လို့လည်း မရဘူး။မေ့ပစ်လို့လည်း မရဘူး အသိစိတ်ရှိနေတဲ့ အချိန်ကာလ တစ်စက္ကန့်ချင်းစီတိုင်းကနေ တွေးမိနေတဲ့အရာက ဒီကောင်တွေကို အမြစ်ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာပဲ။ မနှစ်က ဒီလိုနေ့မှာ ကျဆုံးခဲ့သူတွေအခုအထိ ကျဆုံးနေရဆဲသူတွေ။ ခွင့်လွှတ်လို့လည်းမရဘူး မေ့ပစ်လို့လည်းမရဘူး။ နာကျည်းမှုဟာ ခြေဖျားကနေ ဆံဖျားအဆုံးထိ တဒိတ်ဒိတ်။ အာဏာမသိမ္းခင္က ကိုမင္းကိုနိုင္ ေျပာဖူးတဲ့ စကားတစ္ခု ရွိတယ္လို႔ ေျပာလာတဲ့ ပန္ဆယ္လို အာဏာမသိမ္းခင္က ကိုမင္းကိုနိုင္ ေျပာဖူးတဲ့ စကားတစ္ခု ရွိတယ္။ ခြင့္လႊတ္လို႔ရတယ္ ေမ့ပစ္လို႔ မရဘူးတဲ့။ အခုကေတာ့ ခြင့္လႊတ္လို႔လည္း မရဘူး။ေမ့ပစ္လို႔လည္း မရဘူး အသိစိတ္ရွိေနတဲ့ […]
ခြေလျင်တပ်ရင်း ၈၄က ရင်းမူးနဲ့ ကြက်ကြီးက အင်မတန်စမတ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို
ခြေလျင်တပ်ရင်း ၈၄က ရင်းမူးနဲ့ ကြက်ကြီးက အင်မတန်စမတ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို ခြေလျင်တပ်ရင်း ၈၄က ရင်းမူးနဲ့ ကြက်ကြီးက အင်မတန်စမတ်ဖြစ်တယ်။ ထိပ်တိုက်တွေ့တယ်။ ထွေထွေထူးထူးလုပ်မနေဘူး။ ပြေးတာပဲ။ PDFတွေကို ပုံစံပေးတဲ့အနေနဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း ပြေးလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ မိသွားတယ်။ ထွေထွေထူးထူးလုပ်မနေဘူး။ မိခံပစ်လိုက်တယ်။ PDFတွေခဗျာ မောလို့ လျှာထွက်နေပြီ။ ဟော…. ခနနေတော့ ထွေထွေထူးထူးလုပ်မနေဘူး။ ထပြေးတာပဲ။ ဟိုဘက်က ထွေးညွန့် အရီးညွန့်ဆိုတော့လည်း ထွေထွေထူးထူးလုပ်မနေဘူး။ သေးပစ်လိုက်တာပဲ။ ပြေးရင်းသေးသွားလို့သာ တော်တော့တယ်။ မဟုတ်ရင် ကြွေပန်းကန်နဲ့ ထမင်းကျွေးနေရဦးမယ်။ ရင်းမှူးနဲ့ ကြက်ကြီးက ဗဲရီးစမတ်နော်။ ရဲရဲပြေး၊ ရဲရဲသေးပဲ။ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၈၄က ရင္းမူးနဲ႕ ၾကက္ႀကီးက အင္မတန္စမတ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ ပန္ဆယ္လို ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၈၄က ရင္းမူးနဲ႕ ၾကက္ႀကီးက […]
တို့ PDFတွေ အားလုံးအိမ်သာသွားရင် ဒါမျိုးပဲ စီးတယ် ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို
တို့ PDFတွေ အားလုံးအိမ်သာသွားရင် ဒါမျိုးပဲ စီးတယ် ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို ပရတ်သတ်ကြီးတို့ သိတဲ့အတိုင်း စစ်အုပ်စုရဲ့ အစိတွေ ကပ်ထားတဲ့ဖိနပ် တစ်ရံကို ကို မကြာသေးခင်က လေ လံတင်ရောင်းချအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယခု တဖန်မှာလည်း pdf တွေက ထပ်မံပြီး အိမ်သာစီး ဖိနပ်မှာ အစိတွေ တပ်ထားတာကို ပန်ဆယ်လိုက တို့PDFတွေ အားလုံးအိမ်သာသွားရင် ဒါမျိုးပဲ စီးတယ် ပြောပါဦး ပရီမတို့ကောင်းတယ်…. စတော်ဘယ်ရီလိုပဲလို့။😂😂😂 ဆိုပြီး သူမရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အစိကပ် အိမ်သာစီး ဖိနပ်ဟာ ဘယ်စျေးလဲ….. တို႔PDFေတြ အားလုံးအိမ္သာသြားရင္ ဒါမ်ိဳးပဲ စီးတယ္ ဆိုတဲ့ ပန္ဆယ္လို ပရတ္သတ္ႀကီးတို႔ သိတဲ့အတိုင္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ အစိေတြကို မၾကာေသးခင္က […]
မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် ကြင်စိုး၏ အရူးမီးဝိုင်း ဇာတ်သိမ်းပိုင်း..see more
မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် ကြင်စိုး၏ အရူးမီးဝိုင်း ဇာတ်သိမ်းပိုင်း..see more ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်တော့မည်၊ ဇာတ်လမ်းရဲ့အထွတ်အထိပ် ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးရောက်လာပြီမို့..ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့ပြီ။ အာဆီယံကNUG. ပြည်သူ့အစိုးရကို ထိတွေဆက်ဆံမည်ဟု.ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လျှင်..ပွဲက ပြီးတော့မည်။ မလေးရှားကတော့”သူရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို.စစ်ကောင်စီ ဝက်ကြီးက အမိန့်ပေး ပုတ်ခတ် စော်ကားလိုက်သဖြင့် မခံချိမခံသာဖြစ်ကာ..သူအဆိုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တော့မည်ထင်သည်။ ကာပုရဲ့ဟန်​ပြငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ်ခေါ်ချက်ကလည်း အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ငြင်းပယ်ခြင်းခံလိုက်ရသည်။.. ကာပုလိုချင်တာက KIA. (KIO)KNU. KNPP.နဲ့ .CNF. စသည် အင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များကိုဖြစ်သည်။ တကယ်ရောက်လာမှက..သူခေါ်တိုင်းလာ.သူခိုင်းရာလုပ်ပြီး..အခွင့်အရေးချောင်းနေကြတဲ့.ကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းတောင်ထောက်ခံမှုမရသည့်..မူးယစ်ကုန်သည်များသာဖြစ်သည်။ (ဒီနေရာမှာ ကာပုကြင်စိုးဟာ..တိုင်းပြည်ကိုသူပိုင်ပစ္စည်းလို သဘောထားကာ နိုင်ငံမျက်နှာပြည်သူမျက်နှာကိုမငဲ့ကြည့်ပဲ..သူ့တစ်ကိုယ်စာထွက်ပေါက် အတွက် လုပ်ရာလုပ် ပေးချင်ရာပေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ နောက်လူတွေဖြေရှင်းရခက်မည့်အနေအထားမျိုးဖန်တီးပြီး”မစားရတဲ့အမဲ သဲနှင့်ပက်မည်ဟုကြံစည်နေသည်။)အရည်အသွေးနှင့်စည်းကမ်းပိုင်းတွင်ယိုယွင်းပျက်စီးနေသော သူတပ်ကိုထိမ်းချုပ်ရန်မလွယ်တော့မှန်း.သူသိလာပြီ။ ခေါင်းမာသော ကာပုကြင်စိုးဟာပြည်တွင်း ပြည်ပ ထောက်ခံမှုမရသောသူအတွက်.ထွက်ပေါက်တစ်ခုရလိုရငြားကြံစည်အားထုတ်နေသည်။ လပေါင်းအတော်ကြာလိုင်းပေါ်မှာ.ပျောက်ကွယ်နေသော..သူအမာခံလော်ဘီများဖြစ်ကြသည့်..အောင်မင်းနှင်ဝီရသူတို့ကိုပွဲထုတ်လာပြန်သည်။ ဘောမသဇင်ဦးကိုလဲ..ဗိုလ်နဂါးကိုစိန်ခေါ်ခိုင်းသည်။..အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော် အဖိုးကြီးဂူဂူကိုလည်း..တောင်ဝှေးတစ်ချောင်းပေးပြီးပအို့”အောင်ခမ်းထီးကိုစည်ရုံးခိုင်းသည်။ ယခုအခါ လိုင်းပေါ်တွင်ရှိသမျှ ဘောမလော်ဘီများ ပွဲဆူနေကြသည်။ နောက်အမေရိကန်ကုမ္မဏီကိုငှားပြီး..MRtv. .အပလီကေးရှင်းရေးခိုင်းပြီးလိုင်းပေါ်မှအမုန်းစကားနှင့်သတင်မှားများဖြန့်ချီရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း..ဖျက်ချခံလိုက်ရသည်။ ကြင်စိုးရဲ့စစ်လော်ဘီ..အောင်မင်း၊မိုးဟိန်း၊ဝီရသူ၊စသူတိုသည်.နဂိုထဲကပြည်သူထောက်ခံမှုမရပြည်သူချဉ်ဖတ်များဖြစ်နေသဖြင့်..အဆဲခံရရုံ၊ဟ..ဟ.အပေးခံရရုံသာရှိမည်။.. သို​သော်..ရေနစ်နေသောကြင်စိုးအတွက်ကောက်ရိုးတစ်မျှင်မြက်တစ်ပင်ဖြစ်လိုဖြစ်ငြား..အာသာဖြေနေရုံထက်ဘာမှထူးခြားမလာ…။ […]
ထောက်ပို့နေကျ အဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့ အရှင်မိတဲ့ကောင် ငိုနေတဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်းအကြောင်း ပန်ဆယ်လိုပြော
ထောက်ပို့နေကျ အဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့ အရှင်မိတဲ့ကောင် ငိုနေတဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်းအကြောင်း ပန်ဆယ်လိုပြော ကိုယ်ထောက်ပို့နေကျ အဖွဲ့က Video File တစ်ခု ပို့လာတယ်။ အရှင်မိတဲ့ကောင် ငိုနေတာ။ ကျော့်ကို ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဆိုတာချည်းပဲ။ PDF တွေက မလုပ်ပါဘူးဟဆိုလည်း မရဘူး။ ငိုတာပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ တပ်ထဲဝင်လာတာပါဗျာ။ ရွှေပြည်သာမှာ အချဉ်ပေါင်းရောင်းပါတယ်။ နှစ်လုံးထိုးရင်း ကြွေးတင်တော့ ကြွေးမဆပ်နိုင်ချိန် ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ တပ်ထဲဝင်ရင် မင်းကို ကြွေးမတောင်းရဲဘူး။ မင်းမိသားစုကို ဆန်ဖိုးဆီဖိုးပေးမယ်ဆိုလို့ လိုက်လာတာပါဗျ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မသတ်ရသေးပါဘူးဗျ။ သေနတ်လည်း မပစ်တတ်ပါဘူးဗျတဲ့။ အခုက ဘာလို့တစ်ယောက်တည်း ထွက်လာတာလဲဆိုတော့ ဗိုလ်ကြီးနဲ့ ဖဲရိုက်ရင်း ဖဲရှုံးလို့ စိတ်ဆိုးပြီး ထွက်လာတာတဲ့။ ဒရာမာကင်းက ငိုလိုက်တာကိုယ့်မယ် ကြည့်ရင်း စိတ်တွေလေ။ 🥴 ေထာက္ပို႔ေနက် အဖြဲ႕ကေပးပို႔လာတဲ့ […]